नयाँ गाडी किन्ने मौसम दशैं र तिहार
५ माघ २०७७, सोमवार | Jan 18, 2021 | 22:48:39
By synergyfm on	 October 8, 2018 अर्थ-वाणिज्य
दशैँ र तिहार यसै पनि खुशीका चाडपर्व हुन् । केही वर्ष यता भने यी चाडपर्व सवारी साधन किन्ने मौसम पनि बनेको छ । धेरैले यसपालीको चाडमा चार पाङ्ग्रे सवारी किन्ने योजना बनाउनुभएको होला । हामीले यहाँ नेपालमा सर्वाधिक रुचाइएका र रु. ५० लाखभन्दा कम मूल्य पर्ने गाडीको छोटो विवरण तयार पारेका छौँ जसले तपाइँलाई कुन गाडी किन्ने भन्ने अन्यौलबाट पक्कै बाहिर ल्याउने छ ।
ह्याचब्याक सेगमेन्टको हुण्डाई आइ ट्वाइन्टी एक्टिभ गाडी नेपाली बजारमा पेट्रोल र डिजेल गरी दुईवटा अप्सनमा उपलब्ध छन् । चार सिलिण्डरको ११९७ सीसी १.२ लिटर कप्पा डुअल भीटीभीटी पेट्रोल इन्जिनले अधिकतम ८३ हर्सपावरको शक्ति दिन्छ भने समान सिलिण्डरको १३९६ सीसीे १.४ युटु सी.आर.डी.आइ. डिजेल इन्जिनले ९० हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्छ । एक्टिभको पेट्रोलका गाडीमा ५ स्पीडको म्यानुअल ट्रान्समिसन रहेको छ भने डिजेलमा ६ स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसन रहेको छ । पेट्रोल इन्जिनले १७.१९ किमी प्रति लिटर माइलेज दिँदा डिजेल गाडीले एक लिटरमा २१.१९ किलोमिटर दूरी पार गर्न सक्छ । यो गाडीको इन्धन भण्डारण क्षमता ४५ लिटर रहेको छ भने यात्रु क्षमता ५ व्यक्तिको रहेको छ । यो गाडीको लगेज क्षमता २८५ लिटर रहेको छ । यात्रु र चालकको सुरक्षाका लागि यसमा दुईवटा एयरब्याग पनि राखिएका छन् । नेपाली बजारमा एक्टिभ विभिन्न ३ भेरियन्टमा उपलब्ध छ । तिनको मूल्य ३४,५६,००० (पेट्रोल), ३७,९६,००० (पेट्रोल) र ४२,९६,००० (डिजेल) रुपैयाँ रहेको छ । दशैं, तिहार तथा छठको अवसरमा तपाइँले यो गाडीमा रु. २,५०,००० सम्मको नगद छुट पाउन सक्नुहुनेछ भने एक वर्षसम्म रोड ट्याक्स र इन्स्योरेन्समा पनि छुट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
हुण्डाईको नेपालमा सर्वाधिक विक्री हुने अर्काे गाडी क्रेटा हो । नेपाली बजारमा यो गाडी विभिन्न तीन इन्जिनमा उपलब्ध छ : १३९१ सीसी १.६ लिटर डुअल भीटीभीटी पेट्रोल, १३९६ सीसी १.४ लिटर युटु सीआरडीआइ डिजेल र १५८२ सीसी १ं.६ लिटर भीटीजी सीआरडीआइ डिजेल इन्जिन । चार सिलिण्डर भएका यी इन्जिनले क्रमशः १२३, ९० र १२८ हर्सपावरको शक्ति उत्पादन गर्छन् । क्रेटा गाडीका भेरिएन्ट ६ स्पीड अटो र म्यानुअल दुवै ट्रान्समिसनमा उपलब्ध छन् । यो गाडीको इन्धन भण्डारण क्षमता ५५ लिटर रहेको छ भने यात्रु क्षमता ५ व्यक्ति रहेको छ । यो गाडीको लगेज क्षमता ४७५ लिटर रहेको छ । सनरुफ पनि भएको यो गाडीमा ६ वटा एयर व्याग राखिएका छन् । क्रेटाको पेट्रोल इन्जिनले १६ किमि÷लि माइलेज दिन्छ भने डिजेलले प्रति लिटर २२ किमि दूरी पार गर्न सक्छ । यो गाडीले हातको नाडीमा बाँध्न मिल्ने स्मार्ट की ब्याण्ड पनि सपोर्ट गर्छ जसका माध्यमले तपाइँ फोन उठाउन, गाडीको ढोका खोल्न र बन्द गर्न, गाडी स्टार्ट र अफ गर्न पनि सक्नुहुन्छ । नेपाली बजारमा यो कारको मूल्य रु. ४२ लाख ५६ हजारबाट सुरु हुन्छ । दशैं, तिहार तथा छठको अवसरमा तपाइँले यो गाडीमा रु. २,७०,००० सम्मको नगद छुट सहित एक वर्षसम्म रोड ट्याक्स र इन्स्योरेन्समा पनि छुट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
मारुति सुजुकीको भिटेरा ब्रेजा थोरै मूल्य पर्ने राम्रो एसयुभी सेगमेन्टको गाडी हो । भिटेरा ब्रेजा हाल नेपालमा डिजेल इन्जिनमा मात्र उपलब्ध छ । यो गाडीमा १२४८ सीसीको ४ सिलिण्डर युक्त डीडीआइएस २०० डिजेल इन्जिन छ जसले ६६ हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । गाडीमा ४८ लिटरको इन्धन ट्यांकी रहेको छ भने यो गाडीको लगेज क्षमता ३२८ लिटर रहेको छ । पाँच सिटे यो गाडीले अधिकतम २४.३ किमि प्रति लिटरको माइलेज दिन्छ । यो गाडीमा डुअल एयर ब्याग, क्रुज कन्ट्रोल, अटो सिफ्ट गियर जस्ता फिचर रहेका छन् । भिटेरा ब्रेजाको नेपाली बजार मूल्य रु. ३७ लाख ४९ हजारदेखि सुरु हुन्छ । दशैं तथा तिहारको अवसरमा ब्रेजा गाडीको खरिदमा ग्राहकले नगद छुट, निःशूल्क एसेसोरिज, स्मार्टफोन लगायत उपहार प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
मारुति सुजुकीको बलेनो ह्याचब्याक सेगमेन्टको गाडी हो । यो गाडीमा चार सिलिण्डर अन्तर्गत ११९७ सीसीेको १.२ लिटर भीभीटी पेट्रोल इन्जिन छ जसले ६२ हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । यो गाडी ५ स्पीडको म्यानुअल ट्रान्समिसनले सञ्चालन हुन्छ । गाडीमा ३७ लिटरको इन्धन ट्यांकी रहेको छ भने यो गाडीको लगेज क्षमता ३३९ लिटर रहेको छ । पाँच सिटे यो गाडीले अधिकतम २१.४ किमि प्रति लिटरको माइलेज दिन्छ । यो गाडीमा डुअल एयर ब्याग, क्रुज कन्ट्रोल, रिमोट की लेस इन्ट्री जस्ता फिचर रहेका छन् । बलेनोको नेपाली बजार मूल्य रु. ३२ लाख ८९ हजारदेखि सुरु हुन्छ । दशैं तथा तिहारको अवसरमा यस गाडीको खरिदमा ग्राहकले नगद छुट, निःशूल्क एसेसोरिज, स्मार्टफोन लगायत उपहार प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
भारतीय ब्राण्ड टाटाको नेक्सन एसयुभी सेगमेन्टको गाडी हो । यो गाडी तीन सिलिण्डर अन्तर्गत ११९८ सीसीेको १.२ लिटर रेभोट्रोन पेट्रोल र १.२ लिटरकै रेभोटर्क डिजेल इन्जिनमा उपलब्ध छ जसले ११० हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । यो गाडी ६ स्पीडको म्यानुअल ट्रान्समिसनले सञ्चालन हुन्छ । गाडीमा ४४ लिटरको इन्धन ट्यांकी रहेको छ भने यो गाडीको लगेज क्षमता ३५० लिटर रहेको छ । पाँच सिटे यो गाडीले पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः १७ र २१ किमि प्रति लिटरको माइलेज दिन्छ । यो गाडीमा डुअल एयर ब्याग, टच स्क्रीन नेभिगेसन प्यानल, लगायतका फिचर रहेका छन् । नेक्सनको नेपाली बजार मूल्य रु. ३२ लाख ७५ हजारदेखि सुरु हुन्छ । दशैं तथा तिहारको अवसरमा यस गाडीको खरिदमा ग्राहकले रु. २ लाख नगद छुट, निःशूल्क एसेसोरिज, स्मार्टफोन लगायत उपहार प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
टाटाको टिगोर सेडान सेगमेन्टको गाडी हो । यो गाडी तीन सिलिण्डर अन्तर्गत ११९९ सीसीेको १.२ लिटर रेभोट्रोन पेट्रोल इन्जिनमा उपलब्ध छ जसले ८५ हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । यो गाडी ५ स्पीडको म्यानुअल ट्रान्समिसनले सञ्चालन हुन्छ । गाडीमा ३५ लिटरको इन्धन ट्यांकी रहेको छ भने यो गाडीको लगेज क्षमता ४१९ लिटर रहेको छ । पाँच सिटे यो गाडीले १८ किमि प्रति लिटरको माइलेज दिन्छ । यो गाडीमा डुअल एयर ब्याग, फ्रन्ट डिस्क ब्रेक लगायत फिचर रहेका छन् । नेक्सनको नेपाली बजार मूल्य रु.२३ लाख २५ हजारदेखि सुरु हुन्छ । दशैं तथा तिहारको उपलक्ष्यमा यस गाडीको खरिदमा ग्राहकले रु. २ लाख नगद छुट, निःशूल्क एसेसोरिज, स्मार्टफोन लगायत उपहार प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
फ्रान्सेली ब्राण्ड रेनउल्टको डस्टर एसयुभी सेगमेन्टको गाडी हो । यो गाडी चार सिलिण्डर अन्तर्गत १४९८ सीसीेको १.५ लिटर पेट्रोल र १४६१ सीसीको १.५ लिटर डीसीआइ डिजेल इन्जिनमा उपलब्ध छ । पेट्रोल र डिजेल इन्जिनले क्रमशः १०६ र ११० हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छन् । यो गाडीमा ६ स्पीडको अटोमेटेड म्यानुअल ट्रान्समिसन रहेको छ । गाडीमा ५० लिटरको इन्धन ट्यांकी रहेको छ भने यो गाडीको लगेज क्षमता ४१० लिटर रहेको छ । सात सिटे यो गाडीले पेट्रोलमा ११ र डिजेलमा १७ किमि प्रति लिटरको माइलेज दिन्छ । यो गाडीमा डुअल एयर ब्याग, फ्रन्ट डिस्क ब्रेक, फोर ह्वील ड्राइभ लगायत फिचर रहेका छन् । डस्टरको नेपाली बजार मूल्य रु.३७ लाख ७८ हजारदेखि सुरु हुन्छ । दशैं तथा तिहारको अवसरमा यस गाडीको खरिदमा ग्राहकले रु. २ लाख ३५ हजारसम्म नगद छुट, निःशूल्क एसेसोरिज, अन स्पट फाइनान्स, एक वर्षसम्म रोड ट्याक्स लगायत सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
अमेरिकी ब्राण्ड फोर्डको इकोस्पोर्ट कम्प्याक्ट एसयुभी सेगमेन्टको गाडी हो । यो गाडी १४९७ सीसीेको तीन सिलिण्डर १.५ लिटर पेट्रोल र १४९८ सीसीको चार सिलिण्डर १.५ लिटर डिजेल इन्जिनमा उपलब्ध छ । पेट्रोल र डिजेल इन्जिनले क्रमशः १२३ र १०० हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छन् । यो गाडीमा ६ स्पीड अटोमेटिक र ५ स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसन अप्सनका रूपमा रहेका छन् । गाडीमा ५२ लिटरको इन्धन ट्यांकी रहेको छ भने यो गाडीको लगेज क्षमता ३५२ लिटर रहेको छ । पाँच सिटे यो गाडीले पेट्रोलमा १७ र डिजेलमा २३ किमि प्रति लिटरको माइलेज दिन्छ । यो गाडीमा छ वटा एयर ब्याग, फ्रन्ट डिस्क ब्रेक, सनरुफ लगायत फिचर रहेका छन् । इकोस्पोर्टको नेपाली बजार मूल्य रु.३५ लाख ९० हजारबाट सुरु हुन्छ । दशैं तथा तिहारको उपलक्ष्यमा यस गाडीको खरिद गर्दा ग्राहकले रु. ५० हजारसम्मको नगद छुट, निःशूल्क एसेसोरिज, लगायत सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
फोर्डको फ्रीस्टाइल सीयुभी सेगमेन्टको गाडी हो । यो गाडी ११९४ सीसीेको तीन सिलिण्डर १.२ लिटर पेट्रोल र १४९८ सीसीको चार सिलिण्डर १.५ लिटर डिजेल इन्जिनमा उपलब्ध छ । पेट्रोल र डिजेल इन्जिनले क्रमशः ९६ र १०० हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छन् । यो गाडीमा ५ स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसन रहेको छ । इकोस्पोर्टको जस्तै डिजाइन भएको फ्रीस्टाइलको लगेज क्षमता २५७ लिटर रहेको छ । यो गाडीले पेट्रोलमा १९ र डिजेलमा २४.४ किमि प्रति लिटरको माइलेज दिन्छ । यो गाडीमा छ वटा एयर ब्याग, फ्रन्ट डिस्क ब्रेक, अटो हेड ल्याम्प लगायत फिचर रहेका छन् । नेपाली बजारमा यसको न्यूनतम मूल्य रु.२७ लाख ९९ हजार रहेको छ । दशैं तथा तिहारको अवसरमा फ्रीस्टाइलको खरिदमा ग्राहकले रु. ५० हजारसम्मको नगद छुट, निःशूल्क एसेसोरिज, लगायत सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
चेक कम्पनी स्कोडाको रेपीड सेडान सेगमेन्टको गाडी हो । यो गाडी १५९८ सीसीेको चार सिलिण्डर १.६ लिटर पेट्रोल र १४९८ सीसीको चार सिलिण्डर १.५ लिटर डिजेल इन्जिनमा उपलब्ध छ । पेट्रोल र डिजेल इन्जिनले क्रमशः ७७ र ११० हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छन् । यो गाडी ५ स्पीड म्यानुअल र अटोमेटिक ट्रान्समिसनमा उपलब्ध छ । यो गाडीको लगेज क्षमता ४६० लिटर रहेको छ । गाडीमा ५५ लिटरको इन्धन ट्यांकी रहेको छ भने सिट क्षमता ५ रहेको छ । यो गाडीले पेट्रोलमा १५.१४ र डिजेलमा २१.७२ किमि प्रति लिटरसम्मको माइलेज दिन्छ । यो गाडीमा डुअल एयर ब्याग, फ्रन्ट डिस्क ब्रेक, लगायत फिचर रहेका छन् । नेपाली बजारमा यसको न्यूनतम मूल्य रु.३८ लाख ४५ हजार रहेको छ ।
जापानी कम्पनी होण्डाको अमेज सेडान सेग्मेन्टको गाडी हो । नेपाली बजारमा यो गाडी ११९८ सीसीको १.२ लिटर पेट्रोल इन्जिनमा उपलब्ध छ । चार सिलिण्डर भएको यो इन्जिनले ९० हर्सपावरको शक्ति उत्पादन गर्छ । अमेज गाडीका भेरिएन्ट ५ स्पीड म्यानुअल र अटो दुवै ट्रान्समिसन सिस्टममा पाइने गरेका छन् । यो गाडीको इन्धन भण्डारण क्षमता ५५ लिटर रहेको छ भने यात्रु क्षमता ५ व्यक्ति रहेको छ । यो गाडीको लगेज क्षमता ४२० लिटर रहेको छ । यो गाडीले अधिकतम १९.५ किमि÷लि माइलेज प्रदान गर्छ । अमेजमा डुअल एयर ब्याग, एड्भान्स ७ इन्च टचस्क्रीन, लगायतका फिचर रहेका छन् । नेपाली बजारमा अमेज गाडीका तीन भेरिएन्ट रु. ३२ लाख ७५ हजारदेखि ३५ लाख ७५ हजारसम्मका रहेका छन् । दशैं, तिहार तथा छठको अवसरमा तपाइँले यो गाडीमा रु. १,२५,००० सम्मको नगद छुट सहित इन्स्योरेन्समा पनि छुट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
डब्लुआरभी एसयुुभी सेग्मेन्टको गाडी हो । नेपाली बजारमा यो गाडी ११९९ सीसीको चार सिलिन्डर १.२ लिटर पेट्रोल र १४९८ सीसीको चार सिलिन्डर १.५ लिटर डिजेल इन्जिनमा उपलब्ध छ । यो गाडीको पेट्रोल र डिजेल इन्जिनले क्रमशः ९० र १०० हर्सपावरको शक्ति उत्पादन गर्छन् । डब्लुआरभी गाडीका भेरिएन्ट ५ र ६ स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसन सिस्टममा पाइने गरेका छन् । यो गाडीको इन्धन भण्डारण क्षमता ४० लिटर रहेको छ भने यात्रु क्षमता ७ व्यक्ति रहेको छ । यो गाडीको लगेज क्षमता ३६३ लिटर रहेको छ । यो गाडीका पेट्रोल र डिजेल इन्जिनले क्रमशः १७.५ र २५.५ किमि÷लि सम्मको माइलेज प्रदान गर्छन् । यसमा डुअल एयर ब्याग, सनरुफ, स्मार्ट की, लगायतका फिचर रहेका छन् । नेपाली बजारमा डब्लुआरभी गाडीका चार भेरिएन्ट रु. ४३ लाख २५ हजारदेखि ५० लाख ७५ हजारसम्मका रहेका छन् । दशैं, तिहार तथा छठको अवसरमा तपाइँले यो गाडीमा रु.दुई लाखसम्मको नगद छुट सहित इन्स्योरेन्समा पनि छुट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
टोयोटा प्लाटिनम इटियोस
नेपाली बजारमा जापानी कम्पनी टोयोटाका लक्जरी कार धेरै पाइने गरेका छन् । तर मिड रेन्जको प्लाटिनम इटियोसले छोटो समयमा नै आफ्नो पहिचान बनाइसकेको छ । सेडान सेग्मेन्टको यो गाडीमा ११९७ सीसीको १.५ लिटर पेट्रोल इन्जिन रहेको छ जसले ८९ हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । प्लाटिनम ५ स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसन सिस्टममा पाइने गरेको छ । यो गाडीको इन्धन भण्डारण क्षमता ४५ लिटर रहेको छ भने यात्रु क्षमता ५ व्यक्ति रहेको छ । यो गाडीको लगेज क्षमता ५९५ लिटरसम्मको रहेको छ । यो गाडीले अधिकतम १६ किमि÷लि को माइलेज प्रदान गर्छ । इटियोसमा डुअल एयर ब्याग, एबीएस, पावर विन्डोज, लगायतका फिचर रहेका छन् । नेपाली बजारमा यो गाडीको मूल्य रु. ३७ लाख रहेको छ ।